ဖိလစ်ပိုင် အရိပ်အကအဖွဲ့က ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို ကြိုဆို - Xinhua News Agency
မနီလာ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အရိပ်အကသမားများက ပြင်ဆင်ထားသော အလင်းနှင့်အမှောင်ကြားမှ လှပသိမ်မွေ့သောကကွက်က မကြာမီကျင်းပတော့မည့် ၂၀၂၂ ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများသို့ ဆုမွန်ကောင်းများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကို ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။
EI Gamma Pneumbra အဖွဲ့ က တင်ဆက်ကပြခဲ့သော “အရိပ်အက” သည် ကပ်ရောဂါကာလ၌ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေးများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေဖြင့် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဖွဲ့၏ အနုပညာဒါရိုက်တာဖြစ်သူ မာဗင် မာဖာက ယခု ပြပွဲသည် တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ကောင်းမွန်ခြင်းကိုဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပြီး မကြာမီ ကျင်းပတော့မည့် ဆောင်းရာသီအားကစားပွဲများ ကြီးမားစွာအောင်မြင်စေရန်မျှော်လင့်ကြောင်းဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Philippine shadow dance group welcomes Beijing Winter Olympics
MANILA, Jan. 21 (Xinhua) — Between light and shadow, an exquisite dance prepared by Filipino shadow dancers delivers the good wishes and expectations to the upcoming 2022 Beijing Winter Olympics.
The “shadow dance,” performed by the group El Gamma Penumbra (light and shadow), aims to thank China for supporting the Southeast Asian country’s fight against the pandemic with vaccines.
Marvin Marfa, artistic director of the group, said the show is inspired by the good China-Philippines relationship and he expects great success for the upcoming winter games.